राम्रो लेख्दा पाठकले मर्न दिदैनन्ः अमर न्यौपाने (भिडियो सम्वाद) | KTM Khabar
२०७३ मंसिर २२ गते १७:४१ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । पानीको घाम उपन्यासबाट लेखन क्षेत्रमा उदाएका अमर न्यौपाने सेतो धर्तीबाट पाठक माझ लोकप्रिय हुन पुगे । करौडौ कस्तुरी उपन्यास पनि उनको पाठक माझ चर्चाको विषय छ । उनै आख्यानकार अमर न्यौपानेसँग केटीएमखबर डट कमका लागि रवि भट्टराईले गरेको विशेष सम्वादको सम्पादित अंशः
तपाई पाठकले रुचाइएको लेखक, लेख्न चाँही कसरी आउँछ ?
सायद म लेख्न कै लागि जन्मेको थिएँ की ? मैले सबै भन्दा जानेको नै लेख्न हो । त्यसैले लेखनीलाई नै मैले जीबन शैली बनाऊछु भन्ने निचोड निकाले ।
कहाँ जन्मनु भयो ?
म चितवनमा जन्मे । जन्मेको, हुर्केको बढेको र पढेको सबै चितवन मै हो । हाम्रो पुर्खौली थलो चाँही कास्की हो ।
अनि कलम चाँही कति वर्षको उमेरमा चलाउन थाल्नुभयो ?
म सानैदेखि चलाउँथे । दश वर्र्षको उमेरदेखि नै कविताहरु कोर्थे, कथाहरु पनि कोर्थे ।
अहिलेसम्म कति वटा पुस्तक लेखि सक्नुभयो ?
प्रकाशित चाँही तीन वटा भयो, लेख्न त कत्ति लेखियो लेखियो, कत्ति त डसबिनमा पर्यो कति च्यातियो होला तर यही हो प्रकाशित तीन वटा छन् । दश वर्र्षको उमेर मै मेरो कविताको कापी थियो, म लेख्ने गर्थे ।
विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनलाई के ईस्वरले नै दिएर पठाउँछन् ?
मैले त्यहाँ के भने, मानिस त्यस्तो कस्तुरी हो जोसँंग आफ्नो कस्तुरी थाहा पाउने क्षमता हुन्छ । वनको कस्तुरीलाई आफ्नै नाभीमा भएको कस्तुरी थाहा हँुदैन तर मानिसलाई आफुसंग भएको कस्तुरी अर्थात सुगन्ध थाहा पाउने क्षमता हुन्छ तर पनि करौडौँ कस्तुरीहरु आफू भित्र भएको क्षमता थाहा नपाई मरे । कत्ति मान्छे थाहा नपाई बाँचिरहेका छन् । ज-जसले थाहा पाए आफ्नु क्षमता चिने उनीहरुले संसार चलाइरहेका छन् । जो मान्छेले उनिहरुको जीवनको कस्तुरी चिन्छन् । उनीहरुको जीवन सफल हुन्छ ।
यो धर्तिमा जति पनि मान्छे जन्मेका छन्, उनीहरु सबैमा कस्तुरी हुन्छ ?
हो, हुन्छ तर कस्तुरी हुँदाहुँदै त्यसलाई निष्क्रिय बनायो भने त, त्यो संभव छैन् । भकारीमा धान राखेर रोपिएन भने त उम्रदैन नी ? त्यही हो आफू भित्रको कस्तुरीलाई पनि चिन्न पर्यो रोप्नु पर्यो । गोडमेल गर्न पर्यो अनि त मान्छे सफल भइन्छ ।
भनेपछि तपाईले चाँही चिन्नु भयो अफ्नो क्षमता ?
थाहा छैन, यसको मैले परिक्षा दिइरहेको छु । अब सफल भए असफल भए भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने समय आउँदै छ ।
लेखकले समाज परिवर्तनमा चाँही कस्तो भूमिका खेल्छन नि ?
तपाईले ठिक भन्नु भयो, पुस्तकहरुबाट नै हो परिवर्तनहरु हुने । मलाई कस्तो लाग्छ भने यो भौतिकवादी युगमा मान्छे मेसिनै मेसिनकोबीचमा छ । मानव र मेसिनमा फरक यत्ती छ मानिसमा करुणा छ । सहित्यले जगाउने भनेको करुणा हो जुन करुणाले मनवता मर्न पाउँदैन बस यत्ति भए पुग्छ, जब मानिस भित्र करुणा मर्दैन र मानवता बाँचिरहन्छ हो यही काम साहित्यले गर्दियो भने पुग्छ ।
अहिले मानिस भित्र करुणा मर्दैछ, दया मर्दैछ भन्ने हो ?
स्वभाविक हो, जब मान्छे यन्त्रै यन्त्रमा बाँचिरहेको छ । उसले करुणा दया भन्ने नै बिर्सिसक्यो हो । त्यही करुणालाई जगाउने काम साहित्यले गर्छ ।
तपाई स्थापित लेखक, तपाईको जिविकोपार्जन चाँही साहित्यले गर्दै छ ?
हो, म यसैवाट बाँचि रहेको छु । भनौन म लेखनीबाट नै जीवन चलाइरहेको छु । चुनौतिपूर्ण छ । पैसाले कहिल्यै पुग्दैन तर पुर्याउने हो । यदि राम्रो लेखियो भने पाठकले मर्न दिदैनन् ।
पाठकले कस्ता पुस्तकहरु खोजेका छन् जस्तो लाग्छ ?
पाठकले सरल पुस्तक खोजेका छन् । म जति ठाउँमा जान्छु पाठकहरुले भन्नु हुन्छ निराशाजनक पुस्तक चाँही नलेखिदिनुस है ।
पुस्तकमा पात्रले जति दुख पाए पनि अन्तिममा आशाको दियो चाँही बालि दिनुहोस है भनेर भन्नु हुन्छ । आशावादी साहित्य र सरल साहित्य खोजेका छन् । गहन कुरा सरल भाषामा गहन जीवन सरल भावमा पढ्न चाहेको पाउँछु ।
लेखकहरु शब्दमा बहकिन्छन भनेर भनेर मैले भने भने ?
अहिले त्यो अवस्था रहेन किनकी अहिले जति लेखिन्छन । प्रत्येक वाक्यका उत्तरहरु पाठकरुलाई दिनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तो केही छैन तर अहिले समाज राजनैतिक जटिलता तिर छ । यसका लागि एउटा भिजन भएको लिडर जन्मनुपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु । एउटा राम्रो डाक्टर भयो भने मात्र बिरामीको अप्रेशन गर्न सक्छ तर एउटा राम्रो नेता भयो भने देशको अप्रेशन गर्न सक्छ । एउटा असल डाक्टर भन्दा एउटा असल नेता हुनु कयौँ गुणा राम्रो हुन्छ । किनकी एउटा लेखक, एउटा डाक्टर भन्दा कयौँ गुणा काम असल नेताबाट हुने गर्छ ।
तपाईको सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद ।
अमर न्यौपानेसँगको भिडियो कुराकानी हेर्नका लागि तल क्लिक गर्नुहोसः